ကျောင်းထွက်နှုန်းများလျော့နည်းစေရန် ကျောင်းထွက်လက်မှတ်ယူသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိ - Yangon Media Group
ကျောင်းထွက်နှုန်းများလျော့နည်းစေရန် ကျောင်းထွက်လက်မှတ်ယူသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ဝ- ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းထွက်နှုန်းများလျော့နည်းစေရန် ကျောင်းထွက်လက် မှတ်ယူသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို စိစစ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခြေခံပညာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းနေမြဲနှုန်းများ မြင့်မားစေရန်၊ ကျောင်းထွက်နှုန်းများ လျော့ကျစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ လစဉ်ပြုစုရသည့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူစာရင်း များကို အခြေခံ ပညာကျောင်းများမှ စတင်ပြီး ကျောင်းထွက် လက်မှတ်လာရောက်ယူဆောင်သောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအား မည်သည့်အတွက် ကျောင်းထွက်ရသည်ကို စိစစ် မှုများပြုလုပ်ပြီး ကျောင်းပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်စေရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုများကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးမှူးရုံးများမှ သိရသည်။
”ကျောင်းထွက်လက်မှတ်လာ ယူတဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကို စာရင်းမတင်ခင်မှာ သူဘာ ကြောင့် ကျောင်းထွက်တာလဲဆိုတာကို ကျောင်းအုပ်တွေက မေးမြန်းရမယ်။ ဥပမာ-ရွှေ့ပြောင်းရမှာမို့ ကျောင်းထွက်တာ ဆိုရင် သူနေမယ့်နေရာမှာ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်အောင် ဆရာတို့ဘက်ကလုပ်ပေးရမယ်။ စီးပွားရေးမပြေလည်လို့၊ အိမ်အလုပ်ဝိုင်းကူရလို့၊ ကလေးထိန်းဖို့ လူမရှိလို့ ကျောင်းမတက် တော့ဘူးဆိုရင် ကျောင်းအုပ်တွေရဲ့ခွင့်ပြုမှုနဲ့ အတူကလေး ကို ကျောင်းအထိ ခေါ်လာပြီး ထိန်းရင်း ကျောင်းတက်။ ကလေး ထိန်းရလို့ ကျောင်းမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ ညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းလုပ်ရမယ်။ လိုတာကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက် ကဖြည့်ပေးမှ ကျောင်းသားတစ်ဦး လွယ်လွယ်နဲ့ ကျောင်း ပြင်ပမရောက်မှာ”ဟု ဟင်္သာတခရိုင် ပညာရေးမှူးဦးမြင့်ဝင်း က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ စက်တင်ဘာ ၃ဝရက်တွင် ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အခြေခံပညာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ၏ ကျောင်းတက်နှုန်း၊ ကျောင်းနေမြဲနှုန်း၊ ကျောင်းထွက် နှုန်းများကို အခြေခံပညာကျောင်းများက ပြုစုပေးနေပြီး သုံးလတစ်ကြိမ်ကျောင်းထွက်နှုန်းများကို မည်မျှရှိသည်ကို လည်း ပြုစုပေးရကြောင်း၊ ပညာသင်နှစ် နှစ်စမှစတင်ပြီး သုံး လတစ်ကြိမ်ပြုစုပေးရသောစာရင်းများတွင် ကျောင်းထွက် နှုန်းများနေပါက မည်သည့်အတွက် ကျောင်းထွက်နှုန်းများ နေရသည်ကိုလည်း မြို့နယ်၊ ကျောင်းအလိုက် စိစစ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
”ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ကျောင်းထွက်နှုန်းတွေနည်းဖို့အတွက် ထိန်းတဲ့သဘောပါ။ ဆရာတို့ဆီရောက်လာတဲ့စာရင်းတွေက ပညာသင်နှစ်အစကနဲ့ အရမ်းကွာခြားနေတယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ကျောင်းအလိုက် ပြန်စိစစ်ပြီး ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတင်ခိုင်းရတယ်။ ကျောင်းထွက်နှုန်းများလို့ အရေးယူဆောင် ရွက်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ကချင်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
အခြေခံပညာကဏ္ဍတွင် ကျောင်းထွက်နှုန်း အများဆုံး အတန်းမှာ အလယ်တန်းအဆင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လှည်းကူးတွင် ဖယ်ရှားခံရသည့် အိမ်ထောင်စု ၁ဝဝ ကျော်နေထိုင်ရန် မြေအလှူရှင်တစ်ဦးက မြေဧက ၇ဝ ကေ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးအခမ်းအနား အကြိုအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင
(၂၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု အပါအဝင် ကျပ် ၁ဝ သိန်းဆုနှင့် အထက်ဆုငွေများ ဇန်နဝါရီ ၂ ရ?
ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် ဦးဝေဟင်အောင်ကို စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂ဝ စီ ပြစ်ဒဏ်ခ??
လက်ပံတောင်း တာဝန်ခံ တရုတ်နိုင်ငံသား မစ္စတာ လီတာချူးအား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၅၄ အရ အမျိုးသမီး တစ??
အမေရိကန် အနေဖြင့် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု ရပ်တန့်ပြီး နှစ်ဦးသဘောတူညီသည့် အချက်များ ရှာကြံသွားရ??